घर एशियाई फुटबल स्टोरीहरू हेनरी माइखेटान बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
अन्तिम अपडेट गरिएको डिसेम्बर 1, 2019
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ;'मिकी'। हाम्रो हेनरिख माइखेटान बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्मको उल्लेखनीय घटनाहरु लाई पूर्ण खाता प्रदान गर्दछ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले हेनिख मिख्यातीनको उन्नत प्लेम्याक र सहायता क्षमताको बारे जान्दछ तर केहि रोचक कुरा हो कि पिच बाहिर केहि आफुलाई विचार गर्छन। अब थप adieu बिना, सुरू गर्न दिन्छ।
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -बाल्यकाल
हेनरी माइखिएतन, यारानवनको जेएनएमएमएक्सको एक्सएनएमक्सक्सको जन्म भएको थियो, आर्मेनियाको आमाबाबुले आमाबाबुको लापता पूर्व फुटबलर, हेमलेट माइखिएतन (बुबा) र मरीना तस्चेयन (आमा) लाई जन्म दिए।
1989 मा, जब उनी भर्खरै केही महिना लागेका थिए, तिनको परिवार फ्रान्समा गएर किनकि केही युद्ध जो आर्मेनियामा पसेको थियो। उनको पिताले फ्रान्सको दोस्रो भागमा वेलेंसको लागि पाँच वर्ष खेले।
Henrikh को अनुसार .."जब म4थियो, जब म मेरो बुबा क्लब प्रशिक्षणको लागि छोड्छु म सँधै रुन्छु। हरेक बिहान म भन्न चाहन्छु, पिताजी, तिम्रो साथ ले लो। कृपया कृपया मलाई संग लैजानुहोस्! '
त्यस उमेरमा मैले फुटबलको बारेमा साँच्चै हेरचाह गरेनन, म सिर्फ मेरो बुबा हुन चाहन्न। तर उनले मलाई दौडने बारे चिन्ता गरेर प्रशिक्षणको बेला विचलित नहुन चाहँदैनन्, त्यसैले उहाँ मलाई मूर्ख बनाउन एक चाखलाग्दो योजना लिएर आउनुभयो। एक बिहान, मैले भने, पिताजी, मलाई प्रशिक्षण दिन।
उनले भने, 'होइन, नहीं। आजको कुनै प्रशिक्षण छैन Henrik। म सुपरमार्केटमा जाँदैछु। म ठीक हुनेछु। ' उहाँ प्रशिक्षणको लागि भाग्नुभयो, र मैले पर्खें ... र प्रतीक्षा गरें। केही घण्टा पछि उहाँ घर फर्कनुभयो। कुनै किराना थोरै छैन। मैले यो हरायो। मैले रोए।
'तपाईंले मलाई झूट बोल्नुभयो! तपाईं सुपरमार्केटमा जानुभयो! तपाईं फुटबल खेल्नुभयो! '
उनको हेनरीले सानो हेन्याकलाई लिएर बच्चाको रूपमा माया गर्थे बर्फको गतिविधि हेर्न को लागी बनाइयो।
Hamlet Mkhitaryan र छोरा Henrikh
त्यस दिन पनि भेर्डमा, हेमलेटले आफ्नो छोरालाई मैदानमा प्रशिक्षण दिन थाले। हेनरिकले चाँडै फुटबलको प्रेम विकास गरे र तिनको पिताको पादरी पछ्याउन थालेपछि उनले उनीहरूलाई तालिम दिए। म सधैं फुटबलर बन्न चाहन्छु र म मेरो आमाबाबुलाई धन्यवाद चाहन्छु, जसले मलाई यो सपना बुझाउन धेरै मद्दत गर्यो। "
तपाईं तिनका आमाबाबुले फुटबल चाहानुहुन्छ तर पनि जोर दिएर शिक्षा उनीहरूको बच्चाको लागि आवश्यक हुनुपर्छ। मिकीले शिक्षा र फुटबल दुवै राम्रो सम्भावनामा कसरी संयोजन गर्न सिके। उहाँ जवान उज्ज्वल छोरा हुनुहुन्थ्यो।
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -प्रसिद्धिको कारण
उनले फुटबललाई आफ्नो बुबा हेमलेटबाट सिकेका थिए जो 1908s मा आफ्नो समयको समयमा एक प्रमुख स्ट्राइकर थिए। दुर्भाग्यवश, आफ्नो बुबाको प्रारम्भिक मृत्युले उसलाई ग्रस्त पार्नुभयो। पछि (उनको मृत्युको विवरण लेखमा पछि छलफल गरियो)। हेनरिकले सोधे कि यदि उसको बुबा अझै जीवित थियो भने, "सबै कुरा फरक हुनेछ।" उनको शब्दहरुमा, "मेरो बुबाको मृत्यु वर्षपछि मैले फुटबल प्रशिक्षण सुरु गरें। उहाँ मेरो लागि ड्राइभ थियो, त्यो मेरो मूर्ति थियो। मैले आफैलाई भने, मलाई त्यहि जस्तै चलाउन चाहन्छु। मलाई उहाँ जस्तै जस्तै गोली मार्नु पर्छ। "
तपाईं, उनको पिताले उनको मृत्यु हुनु अघि पेशेवर दृष्टिकोणबाट उपयोगी सल्लाह दिए। उसले7वर्षको लागि मात्र आफ्नो पिताको आनन्द उठाउन सक्छ। उहाँ एक्लै हुनुहुन्थ्यो जब उहाँ केवल7थियो। जो लोग माइखिएतन र उनको पिता देखेको छ, उनीहरूको शैलीहरू एकअर्काको जस्तै धेरै छन्। एक पटक मिकीले भने, "मलाई विश्वास छ कि उहाँले मलाई देख्नुहुन्छ र मलाई गर्व छ ..."
फ्रान्सबाट येरेवान फर्केर फर्किएपछि हेनिखले पहिले नै थाहा पाएको क्यानाडा त्यो पछि लाग्न चाहन्थे। मिखानीले 1995 मा येरेवानको सबैभन्दा ठूलो क्लब एफसी पिकनिकमा सामेल हुनुभयो। त्यसपछि उनले आफैलाई देशको सबैभन्दा प्रतिभाशाली खेलाडिहरु मा विकास गर्न थाले।
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
तिनको सम्पूर्ण परिवारमा पेशेवर फुटबलमा ग्राउन्डिङ छ। उनी र तिनको बुबा क्षेत्रफलमा सफल भए तापनि तिनको परिवारमा महिलाहरूले आफ्नो जीवन बिताएका छन्। अब उनीहरूको बारेमा कुरा गर्न अनुमति दिन्छ;
फेथर: हेमलेट माइखिरेनन, हेनिखको बुबा एक पटक सम्मानित थिए र प्रमुख स्ट्राइकर एफसी अरारा येरेवान 1980s को समयमा। उहाँ एक सानो तर धेरै छिटो स्ट्राइकर हुनुहुन्थ्यो। सोभियत सैनिक पत्रिकाले उनीहरूलाई सम्मान गरे "आक्रमणको नाइट" 1984 मा पुरस्कार।
उहाँ र तिनको परिवार एक पटक बस्नुभयो Kentron जिल्ला येरेवान, जो एमेनियाको हज्जदन स्टेडियम नजिकै छ। जो हाम्लेट र हेन्याख दुवै खेलिरहेका छन् उनीहरूले उनीहरूको शैलीहरू एक-अर्कासँग धेरै धेरै छन्। दुर्भाग्यवश, हेमलेट 33 उमेर मा एक मस्तिष्क ट्यूमर को मृत्यु भएको थियो जब हेनख सात वर्ष उमेर थियो।
यो आफ्नो बुबाको मृत्युमा हेनखिखको कथा हो।
"मेरो बुबासँग मेरो समय धेरै अर्थपूर्ण हुनेछ, तर धेरै छोटो हुन्छ। जब म छ वर्ष पुरानो थिएँ, मेरा आमाबाबुले मलाई बताए कि हामी आर्मेनियामा घर फर्किरहेको छौँ। मैले वास्तवमा के भयो भन्ने कुरा बुझ्न सकेन। मेरो बुबा फुटबल खेल्न थाल्नुभयो, र उनी सबै समय घरमा थिए। मलाई यो थाहा थिएन, तर मेरो बुबाको दिमाग ट्यूमर थियो। सबै कुरा धेरै छिटो भयो। एक वर्ष भित्र, उहाँ जानुभयो। किनकि म धेरै जवान थिएँ, मैले मृत्युको अवधारणालाई पूर्णतया बुझ्न सकेन। मलाई मेरो आमा र वृद्ध बहिनीलाई सधैं हेर्दै सम्झन्छु, र म तिनीहरूलाई सोध्दछु, "मेरो बुबा कहाँ छ?" कसैले पनि के गर्ने भनेर व्याख्या गर्न सकेन। दिनको दिन, तिनीहरूले मलाई के भयो भनेर बताउन थाले। मलाई मेरो आमा भन्नुहुन्छ, 'हेन्याख, उहाँ हाम्रो साथ कहिल्यै हुनेछैन।' अनि मैले सोचेँ, कहिल्यै? जब तपाईं सात वर्षको हुनुहुँदा यस्तो लामो समय कहिल्यै छैन।
उहाँले जारी राख्नुभयो ...
I उनको भिडियो फ्रान्समा खेलिरहेको भिडियोको धेरै छ, र म उनलाई सम्झन धेरै पटक हेर्छु। दुई, तीन चोटि हप्तामा म उनको म्याच हेर्न चाहन्छु, र यसले मलाई धेरै खुशी दिन्छ, विशेष गरी जब क्यामेराले उनलाई देखाउँदा उसले उनीहरूको गोललाई मनाउँथ्यो वा उनीहरूको साथीहरूलाई झगडा गर्दा। ती भिटाइपट्टिहरूमा, मेरो बुबाले भने। भने Henrikh Mkhitaryan
मातृभाषा: हेन्याखले आफ्नो बुबा गुमाएपछि उनको आमा मरीना तान्चेयनले बुबा र आमा दुवैको भूमिका लिइन्।
उसको अनुसार.."यो अत्यन्तै गाह्रो थियो, किनभने मेरो आमा आमा र मेरो बुबा दुवै हुनुपर्दछ। आमालाई यो समाजमा गर्न कठिन छ। त्यो मेरो लागि रहन थियो, र कहिलेकाँही मलाई एक पिता जस्तै हुनेछ मेहनत हुनुहोस्। मैले दिनको दौडान प्रशिक्षण दिनबाट घर आउँदै थिएँ, 'अरे, यो धेरै गाह्रो छ। म छोड्न चाहन्छु। '. अनि मेरी आमाले भने, 'तपाई छोड्नु हुनुहुन्न तपाईंले काम गरिरहनु पर्छ, र यो भोलि राम्रो हुनेछ।' मेरो बुबाको मृत्युपछि मेरी आमाले हाम्रो परिवारलाई समर्थन गर्ने काम लिनुपर्छ। त्यसैले तिनले अर्मेनियाई फुटबल संघको लागि काम सुरु गऱ्यो।
मरेना तस्कियन अर्मेनियाई फुटबल फेडरेशनको राष्ट्रिय टोली विभागको सम्पूर्ण टाउकोमा छ। हेनरी माख्तारनले एक पटक आफ्नी आमाको जन्मदिन मनाउन चहचहानामा आफ्नी आमासँग आफ्नी आमाको तस्विरलाई साझेदारी गरे। पोष्टमा उनले भने "आमाको प्रेम संसारमा केही पनि छैन, जन्मदिनको जन्मदिन, आमा"। तिनका प्रायः अनुयायीहरूले उनको आमालाई सोधेनन्। यो किनभने यो यति जवान देखिन्छ।
सिस्टर: उनको बहिनी UEFA मुख्यालयमा काम गर्दछ। उनी आफैं जिउँदो कमाउन चाहन्छन्। तपाईं Miki कहिलेकाहीँ उसलाई वित्तीय रूपमा सहायता गर्दछ जुन उनी धेरै पटक वस्तुहरू हुन्छन्। एक साक्षात्कारमा,
उनले तिनका शब्दहरूमा भने ..."त्यहाँ तपाईंको 'मेरो र मेरा' जस्तै यस्तो चीज छैन। हामी एक परिवार हो, र हामी कमाएको सबै हाम्रो हो ".
Micki र मोनिकाले एक साथ बच्चाछोरीको सम्झनाको साथमा राम्रो साझा गरे। तिनीहरू दुवै को लागी तस्वीर मा देखेर धेरै सुन्दर लाग्दछन्।
युवा हेन्रख (बाँया) र मोनिका (दायाँ)
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
हेनरी मखिवानन मानिस हो जुन कुनै केटीले विवाह गर्न मनपर्छ ... यद्यपि, केटीहरू, उहाँमाथि दु: ख गर्नुभन्दा चाँडो नगर्नु - हेन्रख तिनीहरूको लागि कुनै समय छैन! न त अब न त निकट भविष्यमा। मखिरियन आफ्नो क्यारियर मा ध्यान केंद्रित छ र एक्लै छ। र उहाँले कुनै पनि व्यक्तिसँग प्रेममा बिर्सने कुनै इरादा छैन जबसम्म उहाँले एकपटक भन्नुभयो भने 30 को पूर्ण अधिकतम उमेर सम्म पुग्छ। तपाई उहाँ धेरै प्रेमिकासँग भेट्नुभएको छ। हामी शर्त छक्क परेमा उहाँ एक पत्नी हुनुहुन्न
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -एक शतरंज मास्टर
जब ग्रहमा प्रायः फुटबल गर्नेहरूको तुलनामा, माखिएतनलाई विशिष्ट भनिएको छ। उहाँसँग एकदमै उत्कृष्ट संज्ञानात्मक क्षमता छ। उहाँको बुद्धि खेलको पिचमा उनीसँग जोडिएको छ शतरंज कौशल। अर्को शब्दमा, हेनिख माइखिएतनको प्रेम सीhess यसको एक उपाय संग सम्बन्धित छ खुफिया अलिकति आश्चर्य लाग्यो कि उहाँले एक पटक पक्कै बिस्तारै प्रशंसकलाई साबित गर्नुभयो।
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -उहाँका मूर्तिहरू
फ्रान्समा हुर्किएको मिडफिल्डरको लागि केहि हद सम्म निराशतापूर्वक, Mkhitaryan को फुटबलिंग मूर्ति पूर्व रियल म्याड्रिड सीएफ र फ्रेन्च विश्व कप विजेता मिडफिल्डर जेमिस्टिन जेडने हो।
मिकीको अनुसार ..."मैले 10 वर्षको उमेरमा मेरो सम्पूर्ण जीवन फुटबल थियो। प्रशिक्षण, पढाइ, हेर्दै, प्लेस्टेशनमा फुटबल खेल्दै पनि। म यसलाई पूर्ण रूपमा ध्यान दिइयो। म विशेष गरी सृजनात्मक खेलाडीहरूलाई मनपर्छ - महासभाहरू। म सधैं Zidane र Hamlet जस्तै खेल्न चाहन्थे। मैले वास्तवमा जेडीनको शैलीको खेलको प्रशंसा गरें र उसले पिचमा के गरे। उहाँ मलाई एक जादुगर जस्तै थियो। मेरो मिडफील्ड शैलीको खेल अधिक Zidane सम्म सम्बन्धित छ जबकि मनपर्ने दृष्टिकोण मा आक्रमण गर्दा मेरो ढोका पितालाई थप गर्दछ। "
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -उच्च शिक्षित
माइखिएट परिवारले 1995 मा फ्रान्सबाट आर्मेनियाको राजधानी येरेवान फर्के। एउटै वर्षमा माइखिनेटले नामाकरण गरे आर्मीनिया मा भौतिक संस्कृति संस्थान। उनले आफ्नो डिप्लोमा कार्यक्रमबाट स्नातक गरे र अध्ययन गर्न प्रत्यक्ष प्रविष्टिमा गए अर्थशास्त्र को येरेवान शाखा मा सेन्ट पीटर्सबर्ग संस्थान.
स्नातकोत्तरमा, एमआईसीले कानूनमा अर्को डिग्री पछ्याउने योजनाहरू पनि विकास गरे। दुर्भाग्यवश, यो पेशेवर फुटबल लिनको लागि आवश्यक भए जस्तो भयो भने धेरै गम्भीरतापूर्वक फोन गरिरहेको थियो। यो अवधि आफ्नो क्यारियर सपनामा ठूलो धक्का चिन्ह लगाइयो। उनले आफ्नो केटाकेटी क्लब एफसी पिकनिक (आर्मेनियामा स्थित) र फुटबल क्लब मेटलुरह डोनेट्स्कको लागि खेल्न उक्ल्यो जसले उनलाई एक आकर्षक प्रस्ताव दिए जुन तिनले स्वीकार गरे।
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -क्लबको प्रशिक्षण ग्राउन्डमा खर्च
खरानी को लागि सधैं उनको घर मा रहन को लागि जान्दिन थियो तर उनको क्लब को प्रशिक्षण को मैदान मा आफ्नो रात को केहि खर्च। उनले सबै क्लबहरूको लागि खेलेका लागि गरे।
अर्मेनियाई अखबार पानोरामा.मलाई फेब्रुअरीमा 2017 मा बोल्दै उनले भने, "म एक मूर्तिको केहि बन्न भएको छु र धेरैले मलाई देख्छु, म मात्र मेरो फुटबलमा ध्यान दिन चाहन्छु ताकि म उनीहरूलाई असर गर्न सक्छु। यहां सम्म कि तपाईं प्रशिक्षण मैदान आराम घरहरुमा खर्च रात को मतलब छ। मैले खेलेका सबै क्लबहरूको लागि, मैले देखेका थियौं कि उनीहरूले मेरो टोली-साथीहरूले मलाई चिन्ता गर्छन्। तिनीहरूले मलाई मलाई [राष्ट्रपति मैदानको] उपनाम दिए। "
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -उहाँको उपनामको उत्पत्ति
मखिरेतनलाई उपनाम दिइएको छ 'Heno ' आर्मीनिया मा आफ्नो प्रशंसकहरु द्वारा। उनले नाम गजल गरे जुन उनको पहिलो नामको छोटो रूप हो 'हेनरी'. यद्यपि, उनी युरोपमा जान्छन् Micki। मखिरियनले एक साक्षात्कारमा लेखे कि उपनाम मिकी पहिले बोरुसिया डर्टमन्ड प्रबन्धकबाट आए, जर्जेन क्लप्प. Jurgen उनको उपनाम अवलोकन गरे पछि उसलाई उपनाम दिनु को निर्णय लिया 'मिखानी' थियो उच्चारण गर्न धेरै लामो। खरेलले जवाफ दिए कि त्यो उपनाम प्रयोग गर्नु ठीक छ। उपनामको अन्तिम अनुमोदन जब उनको प्रमाणमा प्रमाणित गरिएको थियो इन्स्टाग्राम खाता जसको प्रयोगकर्ता नाम is micki_taryan.
हरिचख Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य-एक पटक साओ पाउलो को लागि खेले
2003 मा, 14 उमेर माघीटान ब्राजील मा साओ पाउलो संग परीक्षण भएको थियो जो सफल भयो। उनले क्लबको जूनियर टोलीको लागि खेले। यो टीमको ओस्कर डोस सैंटोस इम्बाबाबा र हारेन्सको मनपर्छ। उनीहरूको साथमा खेल्थे। क्लबमा तिनको बसोबास छोटो थियो। Henrikh Mkhitaryan 2004 मा उनको स्थानीय आर्मेनिया क्लब, पिकनिक फर्के। यो उनको त त्यस प्रबन्धक मिहाई स्टोचिआईजियस थियो जसले आर्मेनियामा फर्किन थाले।
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -एक Polyglot
मखिटिवान एक निश्चित पालिग्लट हो, उहाँसँग सात भाषाहरूको कुल बोल्ने क्षमता छ। यी भाषाहरु मा उनको स्थानीय अर्मेनियाई, फ्रांसीसी, पोर्चुगल, रुसी, यूक्रेनी, अंग्रेजी र जर्मन समावेश गर्दछ। मिकीले रूसीको आफ्नो ज्ञान आफ्नो मातृभाषामा को हुन्, जो को हो रूसी जातीय।
उनले पहिलो तीन भाषाहरू (अर्मेनियाई, फ्रान्सेली र पोर्तुगाली) आफ्नो बचपनमा सिके, जबकि उत्तरार्द्ध चार उनले जर्मनीमा बोरुसिया डर्टमन्डको शख्त डोनेट्स्क र इंग्ल्यान्डमा मैनचेस्टर संयुक्त लागि खेलिरहेका छन।
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -पुरस्कार र दान
2012 मा, येरेवान नगर परिषद को निर्णय ले, र शहर को 2794th सालगिरह संग, Mkhitaryan संग सम्मानित गरियो "येरेवनको मानसिक नागरिक" शीर्षक, फुटबलमा उनको उत्कृष्ट सफलता र खेलहरूमा उनको उत्कृष्ट उपलब्धिहरूको लागि। नोट: येरेवान आर्मेनियाको राजधानी हो।
मखिरियन पनि एक धर्मार्थ व्यक्ति हुन आफ्नो देशमा जान्छ। फुटबल अवकाशकालमा, उनीहरूले पतन भएका सैनिकहरूको परिवारलाई उपहार दान गर्न पूर्व सोल्भेट युनियनको विवादित क्षेत्रहरू भ्रमण गर्न समय पाउँछन्। तिनको दानले उनलाई पुरस्कार दिईयो 'एनकेआर पदक'।
NKR को मतलब (नागरोरो-करबाख गणतन्त्र)। यो NKR प्रधानमन्त्री द्वारा दिइएको राष्ट्रिय पदक हो। यो मान्छेहरूलाई राष्ट्रिय नायकको रुपमा मानिन्छ।
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -आर्मेनिया नेशनल टीमको नेतृत्व गर्दै
मर्किटिन आर्मेनियाको सबै-समय शीर्ष गोल्डर्सर हुन्, जेएनएमएक्सएक्स म्याचमा जेएनयुमएक्स अन्तर्राष्ट्रिय म्याचहरूमा जेएनएमएमएक्समा पहिलो पटक देखिने।
माखिएतनन ​​को आर्मीनियाई फुटबलर को वर्ष सात पल्ट (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 र 2016 पछि) को चयन गरिएको छ। उनले कप्तान को रूपमा यी सबै भन्दा धेरै वर्ष को माध्यम ले टीम को नेतृत्व गरे।
2012 मा, त्यो प्रशंसकहरु द्वारा 2011-12 सिजन को सर्वश्रेष्ठ शुट्टर खेलाडी को रूप मा वोट दिइयो। त्यही वर्ष, तिनी पनि वर्षको यूक्रेनी प्रीमियर लीग फुटबलर पनि भनिन्। यो पनि 2012 मा, UEFA को शीर्ष 100 खेलाडीहरुमा UEFA यूरोपीय फुटबल वर्षपुस्तक 2012-13 मा नाम गरिएको थियो। फेरि, उहाँले 2012 को लागि वर्ष को राष्ट्रमंडल को स्वतंत्र राजस्व फुटबलर को वोट दिइयो, उसलाई पहिलो सोवियत फुटबलर को नाम पछि सोवियत देशहरु को सर्वश्रेष्ठ खेलाडी को नाम दिइयो। उहाँले 2013 को लागि फेरि पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो।
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -उहाँका भविष्य योजनाहरू
अझै पनि जवान, मखिवृत्त भए तापनि उनीहरूलाई सेवानिवृत्त भएपछि एकपटक फुटबलमा काम जारी राख्न कुनै योजना छैन। "म आफैं एक कोच बनेको छैन, यो मेरो कप चिया होइन। म चाहन्नँ कि मेरो कपालले छिट्टै छिटो खानु पार्छ! " बरु, फुटबल पछिको जीवन Mkhitaryan को लागी व्यापार-आधारित हुनेछ, जो आर्मेनिया मा शारीरिक संस्कृति संस्थान र डिप्टीमा सेन्ट पीटर्सबर्ग संस्थान मा एक अर्थशास्त्र मा डिग्री पनि हुनेछ।
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -उहाँले लगभग 2013 मा लिभरपूलमा सामेल हुनुभयो
2013 को गर्मीमा, त्यसपछि लिभरपूल प्रबन्धक ब्रेंडन रोर्गर्सले एक पटक म्याचनेटलाई आफ्नो ट्राफिक लक्ष्य बनायो।
त्यसोभए, उनले उक्रेनको शीर्ष फ्लाइटमा उडानको पहिलो गोल गरेका थिए, उनले शंकर डोनेट्स्कका लागि एक्सएनएमएक्सएक्स लीग खेलमा 25 गोल गरे। सम्झौताको साथ लगभग सकियो र उनको रिपोर्टले एन्फील्डलाई चिकित्सा बनाइ हेडलाइनको लागि उडान गर्यो, दुर्भाग्यवश पछि पछ्याएको थियो। लिवरपूल प्रशंसकहरूलाई छोटो छोटो थियो। उनीहरूको मिडफील्ड सम्भावनालाई सम्झौता गर्ने सम्झौताले एफील्डलाई हल्का पारेको थियो भने पहिले बोरुसिया डर्टमन्ड प्रबन्धक जर्गन क्लप्पले जितेको थियो। जर्गनले एक प्रस्ताव गरे जुन तिनले अस्वीकार गर्न सकेनन् र तिनले एन्फील्ड भन्दा सिग्नल आइडिना पार्कलाई आफ्नो भविष्यको रूपमा रोजेका थिए।
तपाईं मख्तीयनले जोर दिए कि यो पैसा थिएन, तर फुटबल डर्टमन्डको ब्रान्डले उनलाई क्लोपको प्रस्ताव स्वीकार गर्यो।
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -एक पल्ट एक होटल मा जोस Mourinho संग रुके
मखिरेतन, म्याचचेस्टर युनाइटेडमा आफ्नो आगमनमा प्रतिष्ठित लोरी होटल एक वर्षको लागि रह्यो। तिनको बसाइमा उत्प्रेरित भएको थियो Jose Mourinho जो त्यहाँ एकैचोटि आफ्नो परिवार संगै बस्न थाल्छ। त्यस समयमा, दुवै पक्षहरू शहरमा बस्न नयाँ थिए। म्यानचेस्टरमा एक घर किन्न वा भाडा गर्नु अघि होटलमा रहन विचार धनी व्यक्तिहरुको लागि ठूलो शहरमा काम गर्नेहरूको लागि एक सामान्य छनौट हो। मिकीको अनुसार, "जोस उहाँले यहाँ आउनुभन्दा अघि उहाँले शहरको बारे धेरै जान्नुभएन। उनले मलाई मलाई होटलमा बस्न सल्लाह दिए जहाँ उनले "
Mourinho र Mkhitaryan दुवै अब मध्य पश्चिम मा मैनचेस्टर मा स्थायी आवास पाएको छ।
Henrikh Mkhitaryan बचपन स्टोरी प्लस Untold जीवनी तथ्य -क्यू र ए
- मन्चेस्टर युनाइटेडमा पुग्दा कतै उत्सुक वा मजेदार चीजहरू तपाईंसँग छ? सायद केही असामान्य कलहरू र सामानहरू?
- 'हो, मैले अजनबीहरूबाट धेरै कल प्राप्त गर्छु।'
- र तिनीहरूले के चाहन्छन्?
- तिनीहरू सबै पैसा चाहन्छन्! '
- तपाई तिनीहरूलाई के भन्नुहुन्छ?
- म तिनीहरूलाई इन्कार गर्दछु। म कसरी अजनबीहरूलाई पैसा दिन सक्छु वा केवल उधार लिन्छु? म यसलाई कहिल्यै फिर्ता नदिऊँ।
- के तपाईं घातक हुनुहुन्छ? तपाईं भाग्यमा विश्वास गर्नुहुन्छ?
- 'हो, अवश्य। जन्मको मिति मेरो भाग्य निर्धारण गर्दछ। जहिले पनि अरू कसैको हैसियतमा। जीवन एक किताब हो, र हामी अभिनेताहरू हौं जो लेखिएको छ अनुसार अनुसार। म पनि राशि चक्रमा विश्वास गर्दछु। म एक्वैरस हुँ
परिमार्जित मिति: नोभेम्बर 25, 2019
अरेडी अर्शुभिन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ को जीवनी तथ्य
परिमार्जित मिति: डिसेम्बर २,, २०१ 18
Shinji Kagawa बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य